Isiqwenga seParadesi - I-Airbnb
"Iqhekeza leParadesi" yindawo efanelekileyo yokuphumla. Hlala kwibhentshi yedokhi okanye kwizitulo ezitofotofo ze-Adirondack kwaye ujabulele umbono. Zisa iikayak zakho, amaphenyane, okanye iibhodi zokubhexa ezinokutyibilika ngokulula emanzini ukusuka kwipropathi. I-Roaring Point Park kunye ne-Nanticoke Harbor yimizuzu nje kude. I-Salisbury imalunga nemizuzu engama-30 apho unokufumana iindawo zokutyela ezininzi, ukuthenga kunye nokhenketho. Amagumbi amabini okulala adityaniswe negumbi lokuhlambela enza ukuba ilungele usapho okanye abahlobo abahamba kunye.
Indawo yokungena yabucala enesitshixo esidityanisiweyo ikungenisa kwindawo enekhitshi, amagumbi amabini okulala kunye negumbi lokuhlambela. Wamkelekile ukuba usebenzise zonke izinto ezikumagumbini, kubandakanywa itafile yekhadi, izitulo ezisongayo, iikhadi zemithwalo, imiqamelo eyongezelelweyo, iingubo njl njl. Zive ukhululekile ukusebenzisa izinto kwiikhabhathi, ibhodi esecaleni, inkwenkwe emide kunye neelokhwe ezinezinto ezifana nezitya, izinto zesilivere, iiglasi kunye nezinye izinto zasekhaya.
Simi kude neNdlela yaseNanticoke. Uthatha ilungelo kwiNanticoke Drive. Siyindlu yesibini kwi-rancher ebomvu ekhohlo eneflegi yaseMaryland iphaphazela kwicala lasekunene lendlu. Ukuba uthatha iWhitehaven okanye iUpper Ferry ukuza apha ungafuna ukubatsalela umnxeba kuqala ukujonga iiyure zokusebenza. Indawo yokuhlala ikhuselekile ukuhamba ngebhayisekile okanye ukuhamba. I-Nanticoke Acres ligama lophuhliso. Umxube wamakhaya amatsha kunye namadala osapho olulodwa.
Fowunela uPat okanye uKevin kwiiselfowuni ukuba kukho naziphi na iimfuno okanye imibuzo.